iOS 8 dia manafina ny 3D Virtual Tour amin'ny fampiharana Maps | Vaovao IPhone
Ireo hackers dia manohy manafina ny antsipirian'ny miafina rehetra amin'ny iOS 8 Betas, ary manana endrika vaovao tsy noresahin'i Apple momba azy izahay ary tsy azo idirana ara-dalàna: fitsangatsanganana an-tanàna 3D mampiasa ny mason'ny vorona ao amin'ny fampiharana iOS Maps. Nahita izany ny mpamorona Pierre Blazquez, ary mety hifanaraka amin'ny zava-baovao niseho tamim-pahamalinana tao anaty slide an'ny famelabelarana Apple saingy tsy nisy nolazaina hoe: City Tour. Atorinay anao amin'ny horonan-tsary hoe inona marina io safidy io.
Araka ny hitanao, io dia momba ny azontsika atao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny safidy "Fly Over" amin'ny Maps fa vita ho azy, mampiseho aminay ireo singa maritrano marobe roa manan-danja amin'ny tanàna toa an'i Paris, ny Pantheon amin'ny toerana voalohany sy ny Katedraly Notre Dame avy eo. Vita amin'ny fihodinana sy ny effets zoom dia ho mahasarika maso kokoa ny fizahana. Ny safidy dia tsy misy afa-tsy amin'ny tanàna sasany, Paris voalaza etsy ambony ary koa Roma, New York, Barcelona, ​​Glasgow, San Francisco, sns. Izy io dia tsy isalasalana fa mbola asany amin'ny fizahana fitsapana ary amin'ny fanombohana ny iOS 8 dia azo antoka fa hahitana tanàna maro hafa, angamba ireo rehetra izay misy fijery 3D.
Araka ny efa nambarantsika andro vitsivitsy lasa izay, Ny sarintany dia iray amin'ireo fampiharana tsy teo tamin'ny Keynote farany teo. Na eo aza ny zava-misy fa miasa mafy Apple hanatsarana ny fampiharana malaza, toa tsy dia naseho ny fanatsarana nomanina tao amin'ny WWDC 2014. Ny fanantenana dia hisy vaovao maro amin'ny famelabelarana amin'ny ho avy, angamba ao amin'ny fampisehoana ireo fitaovana Apple vaovao (iPhone 6, iPads vaovao, iWatch, sns) izay azo antoka fa avy hatrany aorian'ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra fahavaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 8 » iOS 8 dia manafina ny 3D Virtual Tour ao amin'ny application Maps